Umkhiqizi nomhlinzeki wase China graphite clay I-Jinglong
I-graphite clay crucible inebanga eliphelele lezincazelo kusuka ku-1 # kuye ku-1500 #. Yenziwe ngezinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme nefomula yobuchwepheshe obuphezulu, i-graphite clay crucible inezinzuzo zokuminyana okuphezulu, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhutshwa okusheshayo, ukumelana okunamandla kwe-oxidation, ukumelana nokushaqeka okukhulu kokushisa, ukusebenza kwamakhemikhali okuzinzile, ukwakheka okuhle, okuqinile , njll.
Ngekhwalithi yayo ezinzile nethembekile, ijabulela imakethe enhle ngaso sonke isikhathi. Kuyisitsha esidingekayo ekubunjweni nasekuphonsweni kwensimbi okungeyona eyensimbi. Ngesikhathi esifanayo sisekela ukukhiqizwa kwe-graphite tube, i-graphite pad neminye imikhiqizo, futhi senze imikhiqizo ekhethekile emise i-graphite ngokuya ngemikhiqizo ehlukile ye-requir.
Into Ipharamitha ejwayelekile Idatha Yokuhlola
Ukubuyisela emuva ract 1630 ℃ 1635 ℃
Okuqukethwe kweCarbon ≥ 38% 41.46%
Ukuba nesifiso esikhulu 35% 32%
Ukuminyana kwenqwaba ≥ 1.6g / cm³ 1.71g / cm³
I-Graphite Clay Crucible * Ukucaciswa
Ukucaciswa (D) Ububanzi Outer Outer (H) Ukuphakama sekukonke (d) Ububanzi Base-Outer
Qaphela: Amanani angenhla awereferensi kuphela, ubukhulu bangempela bomkhiqizo buzobusa, futhi i-crucible ekhethekile eyenziwe ngokwezifiso iyatholakala.
Amanothi wokusebenza kwe-graphite crucibles
1. I-crucible kufanele ifakwe esimweni esomile
2. Phatha i-crucible kalula
3. Ukufudumeza i-crucible emshinini wokomisa noma eduze kwesithando somlilo. Izinga lokushisa kufanele lifike ku-500 ℃.
4. I-crucible kufanele ifakwe ngaphansi kwesithando senyanga yesithando somlilo.
5. Lapho ufaka insimbi ku-crucible, kufanele uthathe amandla we-crucible njengesethenjwa sakho. Uma i-crucible igcwele kakhulu, izolimala ngokwandiswa.
6. Izimo zokubopha zidinga njengaleyo ye-crucible. Gwema ukugxilwa okugxile kokugcizelela kwe-crucible.
7. Hlanza i-crucible njalo futhi kalula.
8. I-crucible kufanele ifakwe enkabeni yesithando somlilo futhi ishiye ibanga elithile phakathi kwe-crucible kanye nesithando somlilo.
9. Shintsha i-crucible kanye ngesonto elilodwa futhi lokhu kuzosiza ukwandisa impilo yenkonzo.
10. Ilangabi akufanele lithinte i-crucible ngqo.
11.Ukusetshenziswa njalo kwamahora angama-24 kuzokwenza iziphambano zibe nempilo ende yokusebenza.
Langaphambilini UHP electrode
Olandelayo: I-Pyrolytic graphite crucible